३० बर्ष जङ्गलमा बसेका भाईरल पिएचडी बाबालाई के भयो फेरी ? यति धेरै गुनासो किन ? (भिडियो) « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
३० बर्ष जङ्गलमा बसेका भाईरल पिएचडी बाबालाई के भयो फेरी ? यति धेरै गुनासो किन ? (भिडियो)
तर अहिले उनको पुरै होलीया परिवर्तन भएको छ । उनले आफ्नो कपाल तथा दार्ही काटेर हेन्सम पिएचडी बाबा बनी सकेका छन् । अंङ्ग्रेजी बाट अन्तर्वाता दिए पछि उनको चर्चा चुलीएको थियो । सोहि अनुरूप यस अन्तर्वातामा उनले सहजै संस्कृत बाट उत्तर दिएका छन् । उनले यहाँ सम्म आउन साथ दिनेहरुको नाम बताउदै पुण्य तिम्सिनाको बारेमा पनि केहि कुरा गरेका छन् । बाकीँ कुरा भिडियोमा हेरौँ